यो के गर्न खोज्दैछन् कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले ? देउवालाई नै टक्कर !
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले जग हसाउने काम हुन थालेको छ । नियुक्त भएको दुई साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको र सिंगो सरकार एक्लै चलाउन थालेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो ।
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले जग हसाउने काम हुन थालेको छ । नियुक्त भएको दुई साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको र सिंगो सरकार एक्लै चलाउन थालेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो । नयाँ मुख्यमन्त्रीले के गर्न खोजेको भन्दै रोस प्रकट हुन थालेको छ । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न झण्डै १०० दिन लगाएका थिए । देउवालाई नै टक्कर दिने लाइनमा मुख्यमन्त्री अघि बढेको आरोप लाग्न थालेको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही एक्लैले सम्हालेका छन् । सत्ता साझेदार तीन दलबीच प्रत्यक्ष रूपमा संवाद हुन नपाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशका शीर्ष नेताहरू प्रदेशबाहिर भएकाले यसबारे औपचारिक रूपमा छलफल हुन नसकेको बताइएको छ ।
कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जीवन शाहीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी र समाजवादीले तीनरतीन वटा मन्त्रालयको अनौपचारिक रूपमा दाबी गरेका छन् । यता, मुख्यमन्त्री पाएको कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलहरूलाई दुईरदुई वटा मन्त्रालय दिई अरु मन्त्रालय आफै लिने तयारी गरेको छ ।
यसैबीच यता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मुगुको सदरमुकाम गमगढीमा आगलागीबाट पीडित भएकालाई राहत दिने घोषणा गरेका छन् । उनी राहत लिएर आज प्रभावित क्षेत्रमा जाँदै छन्। उनकाअनुसार आज प्रभावितका लागि खाद्यान्न र त्रिपाल वितरण गरिने छ । त्यहाँको स्थिति अवलोकन पछि थप राहत वितरण गरिने उनले बताए ।
गएराति १२ बजेदेखि लागेको आगोका कारण २१ वटा घरमा पूरै क्षति भएको छ । प्रहरीकाअनुसार आगोले १८ वटा घर पूरै जलेका छन् । यस्तै, घुम्ती पसल राखिएको दुई वटा घर पनि जलेर नष्ट भएका छन् । यस्तै, आगो निभाउनका लागि एउटा घर भत्काइएको छ । गएराति १२ बजेदेखि लागेको आगो अघि बिहान १० बजे मात्र पूर्ण रुपमा निभाइएको छ ।
सेना, प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाको प्रयासमा आगो निभाइएको हो । स्थानीय ठिग्ने लामाको घरमा बालेको दियोबाट आगो सल्किएको अनुमान गरिएको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ।